iftineducation.com – Gurmadkaan biyo dhaamintaa oo socon doona muddo bil ah isla markaana ay maal galineyso Hay’adda Socdaalka Aduunka ee IOM ayaa maamulka gobalka Mudug ee Galmudug waxa uu ka bilaabay qaar ka mid ah deegaanada gobalka. kuwaasi oo ay ka jiraan biyo la’aan heysata dadka iyo duunyada goobahaasi ku nool.
Cawil Nuur Gufaaco oo ku hadlayay magaca Hay’adda barnaamijkan maal galineysaa ee IOM ayaa usharaxay warbaahinta Qaranka tirada goobaha loogu tala galay in la gaarsiiyo Biyo Dhaamintaan, waxaana uu yiri (Maanta waxaan joognaa deegaanka Gal cadale oo ka tirsan dagmada Hobyo ee Gobalka Mudug oo aan ka wadno biyo dhaamis ay bixisay Hay’adda IOM Hay’adda oo bilowday 25-kii Febaraayo kuwaasi oo ku eg 25 Maarso biyaha
dhaamintana hay’addu waxay ka wadaa 23 goobood oo ka tirsan Gobalka Mudug, waxaan rajeynayaa in talaabadaan ay yareyn doonto baahida biyood ee heysta dadka ay abaartu saameeysay).
Qaar ka mida dadkii biyo dhaaminta loo sameeyay ayaa iyagu dhankooda ka mahad celiyay, iyagoo xusay in ay baahi weyn u qabeen iyagoo dhanka kalena xusay in biyo dhaaminta loo sameeyay iyo gurmadyada kale ee soo gaaray aysan ku filneyn baahidooda ayna codsanayaan in lasoo gaarsiiyo taakuleyn intaan ka badan.
Guddoomiye ku xigeenka Arimaha maamulka iyo maaliyadda Gobalka Mudug Axmed Maxamed Shire (Qoodaar) ayaa mahad celin kadib sheegay in ay jiraan baahiyo intaan ka badan loona baahan yahay in la kordhiyo biyo dhaaminta iyo Gurmadyada kale ee loo sameynayo dadka ay abaartu wax yeeleeysay.
Gurmadyadaan loo sameynayo Qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ayaa ah kuwo aan dabooli karin baahida heysata kumanaanka Qoys ee ku xoola beelay abaaraha ka jira Gobalka Mudug, maadaama abaartu ay bulshada gobalka Mudug iyo guud ahaan Soomaaliya ay u saameysay si isku mid ah dhamaantoodna ay u baahan yihiin in la samata bixiyo dadka mar haddii ay ka dhamaadeen intooda badan xoolihii ay dhaqan jireen isla markaana udub dhaxaadka u ahaa nolashooda.